Maitiro ekuisa iOS 9 pane yangu iPhone | IPhone nhau
Sekuvimbisa kwaCraig Federighi musi wa8 Chikumi paWWDC Keynote, ikozvino zvave kugona kuisa yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 9, inopindirana neyechitatu beta yevagadziri. Zvine musoro kuti Apple inoburitsa yekutanga vhezheni vhezheni ivo pavanenge vatobvisa sisitimu nekuti, zvikasadaro, vasiri-vagadziri vangave nemamwe matambudziko mazhinji, chimwe chinhu chisinganyanye kukosha.
Une yakadzama chinyorwa nezve nhau dzakabatanidzwa mune ino yechitatu beta yevagadziri / yekutanga yeruzhinji asi, zvine musoro, pachave nemamwe akawanda nhau kupfuura ayo ataurwa muchinyorwa kana iwe ukaisa iOS 9 kekutanga. Pamashoko makuru anouya neIOS 9, ndaizosimbisa Apple Music, iyo nyowani yekushandisa manotsi uye bhatani re "Dzokera ku ...", ndiwo mabasa matatu ekutanga akauya mupfungwa.
Kuti uise iyo yeruzhinji betas, unofanirwa kunyorera, kuitira kuti chishandiso chakasarudzwa chiwanikwe iwo mabetas uye nekuvandudzwa kwavo mune ramangwana. Tevere tinoenderera mberi kududziro iyo nhanho dzekutevera kunyorera kune iyo betas uye kukwanisa kuisa iOS 9 yeruzhinji beta.
Maitiro ekuisa iOS 9 yeruzhinji beta
Ngatiendei ku peji re Apple's beta software chirongwa.
Takatamba pa Imbirai kumusoro (Nyorera. Kana iwe watove kunyoresa, enda ku "Imba mukati").
Isu tinoisa yedu ID yeapuro.
Takatamba pa Imbirai kumusoro/ Nyorera mu.
Kana isu tine chokwadi mumatanho maviri, tinokuudza chishandiso chekugamuchira meseji uye tinopinda mairi.
Tangova mukati, ticha "nyora zvishandiso zvako".
Kubva pane yedu iOS chishandiso tiri kuenda beta.apple.com/profile, tinotora pasi purogiramu yacho nekuiisa.
Neprofile yakaiswa tinogona kudzokorora kuburikidza neOTA kana iTunes
Iwe unofanirwa kufunga kuti iwe uchaisa beta. Kunyangwe iri yakaenzana neyechitatu beta kune vanogadzira, matambudziko uye zvipingamupinyi zvichiri kutarisirwa, saka, kana iwe ukachiisa, hazvisi pane chishandiso icho basa rako rinoenderana nacho kana iwe unoshandisa chinhu chakakosha kwazvo. Iwe haungade kuona kuti, munguva yekurumidzira, yako iPhone inotonhora uye iwe ukarasikirwa yakakosha kufona kana usingawane chimwe chinhu chaungade kuziva. Icho hachisi chinhu chinofanira kuitika, asi zviri nyore kuitika mubeta pane mune yekupedzisira vhezheni. Zvakakosha kuchengeta izvi mupfungwa. Ini, semuenzaniso, ndine iOS 9 pane iPhone 5s inova yangu yekuchengetedza foni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa iOS 9 pane yangu iPhone
Joshua Valenzuela akadaro
chii chitsva chakakodzera icho?
Pindura Josué Valenzuela
Brandon brandon akadaro
Usazviita. Iko kusawirirana nemashandisirwo mazhinji. Iyo ine zvakare mabugs, senge ese beta. Mira zvishoma uye usaite zvandinoita.
Pindura Brandon Brandon
Roy villalba akadaro
Pindura Roy Villalba
Leo VaR akadaro
Pindura kuna Leo Rom
Ini ndamboedza kutumira meseji newhatsapp ndichishandisa maikorofoni (haisi meseji yekuteerera) asi nekuraira mameseji, uye kune kugogodza kurira kurira kusingaregi kutamba kudzamara ndazoshandisa chero odhiyo zvakare, chiri chinhu ichangopfuura iyo ini ndichangowana, ini ndatotumira mhinduro
Carlos Uribe akadaro
Ndakaiisa uye zvakanaka zvimwe zvinhu zvidiki zvisingandibata zvakanyanya
Pindura Carlos Uribe
Mhoroi, nezuro husiku ndakaisa iyo beta, muchinyorwa chakapfuura vakati iwe ungatogona kuisa ios9 beta "3" asi iri beta 1!
Iyi iri pane iPhone 6, ndinozviwana neinotevera:
1- pabhobhoyo kana iwe ukadzvanya kiyi haichawedzere sepakutanga!
2- Ini handina kuona maitiro ekugadzira iwo madhirowa kana zvimwe zvese zvekuvandudza muchikamu chemanotsi!
3- whatsapp inoshanda zvakakwana kwandiri uye kutumira zvinyorwa zvakare!
4- zvakanaka ini ndinoda iyo nyowani multitasking zvimwe!
5- mhedzisiro mitsva yeSiri mafungu zvakanyanya!
6- iyo yakadzoreredzwa huru yekutarisa!
7- Zvakanaka, iyo nyowani app, ini handina kuyedza nemazvo!
Asi ini ndoda kuziva kuti nei tisingakwanise kusimudzira kuenda beta 3!
Iwe unoziva kana uri beta 3 paunonyora makiyi akawedzerwa zvakare! Kunge tsamba A ye iPhone nhasi!
Kwazisai, chimwe chinhu chitsva kuona ini ndinokunyorera!
Pindura kuna Gabrielort
Mhoro, Gabrielort. Iko kune imwechete beta ine mazita maviri akasiyana: kune beta matatu yevanogadzira uye yekutanga ruzhinji kune vasiri-vagadziri. Ose akafanana.
Francisco Alberto Guerrero Bautista akadaro
Ini handiwane iyo ota dai ndakakwanisa kuisa iyo profil asi ini handina kuwana iyo yekuvandudza
Pindura kuna Francisco Alberto Guerrero Bautista
Kuti usimbise iyo keyboard, iwe unofanirwa kuenda kuzvirongwa -> zvakajairika -> keyboard uye nekumisikidza "hunhu hwekutarisa"
Mhoroi, ini ndichangobva kuvandudza uye ndiri kuita zvisirizvo, Safari haina kupindura mushure memaminetsi x, kubatana kweWi-Fi zvakare uye hakundibvumidze kubatanidza yangu… wachi ... Kana mumwe munhu achiziva kuzvigadzirisa ...
Zahira Hdz Mtz akadaro
Izvi zvakanaka, zviedze, zviri pachena kuti zvine zvikanganiso zvidiki asi zvakafanira
Pindura Zahira Hdz Mtz
Matei marian akadaro
Ini ndakaiisa kubva nezuro t kusvika zvino hapana dambudziko
Pindura Matei Marian
Izvo hazviite kuti ndiite kopi yeICloud, zvinondiudza kuti handina nzvimbo ... pane chero munhu anoziva nei?
Uye zvinondiudza kuti muICloud ini handina chinhu, nzvimbo yese haishandiswe, uye zviripo zvangu zvekupedzisira zvinwiwa?
Marlon rivas akadaro
Pindura Marlon Rivas
Jaime Figueroa akadaro
Hukuru !!! Ndinozviona zvakakwana !!!! Ndatenda
Pindura Jaime Figueroa
Omar White akadaro
Rombo rakanaka, ndangoisa, handizive kana zvikaitika kwandiri chete, asi handikwanise kutora mifananidzo ine Flash inoshanda. Mavhidhiyo kana tochi ichishanda.
Pindura kuna Omar Blanco
Daniel CM akadaro
Mhoroi, ini ndakaisa yeruzhinji beta 1 yeIOS 9, ndinogona kuisunungura uye kuisazve kuti ndione kana zvimwe zvinhu zvagadziriswa?
Pindura kuna Daniel CM
Inobviswa sei zvachose?
mumwe munhu anoziva?
Pindura kuna GabrielaGr.
Nayely Gonzalez akadaro
Ndine iphone 4 uye ndakaedza nzira dzinoverengeka dzekuvandudza ios uye haindibvumidze kuzviita, iyo yega vhezheni yandinayo ndeye 7.1.2, ndinofanira kusiya basa ndotenga nharembozha nyowani?
Pindura kuna Nayely González
Ndine iphone 4 uye ndakaedza nzira dzinoverengeka dzekuvandudza ios uye haindibvumidze kuzviita, iyo yega vhezheni yandinayo ndeye 7.1.2, ndichafanirwa kusiya basa ndotenga cell nyowani?
Iyo Mesh, mutambo wakanaka wekushandisa kugona kwako kwepfungwa
Apple inodhinda mbiri nyowani iPhone 6 zviziviso